Lakulan – Milkiilaha deeqsiga ugu fiican dalka Montenegro. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Lakulan – Milkiilaha deeqsiga ugu fiican dalka Montenegro.
Posted by: radio himilo June 18, 2017
Muqdisho – Radomir Novakovic Cakan waa guulayste ganacsade ah oo ku nool Montenegro, kaas oo lagu naanayso ‘Milkiilaha ugu fiican Balkan iyo Aboowe’.
Previous: Klaassen: “Halkanna waan ku sameyn karaa dhalinta goolal badan.”
Next: Maqal:-Barnaamijka Martida Ramadaanka 18 06 17